တရုတ်ရှန်ဒေါင်း Chenan Machinery - စက်ရုံမှာရောင်းမည် Chencan M1325A CNC Wood က Router စက်
စက်ရုံမှာရောင်းမည် Chencan M1325A CNC Wood က Router စက်
Chencan M1325A ဂန္နှင့်အရောင်းရဆုံး Router က CNC စက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကက်ဘိနက်ချမှတ်ခြင်း, စသည်တို့အောင်သစ်သားတံခါးသည်အဖြစ်တတ်နိုင်, တန်ဖိုးနည်းနှင့်ကျယ်ပြန့်ပါသည် .. ဒါကြောင့်လေထုဗိုင်းလိပ်တံ, မူရင်း NK105 Controller, လေဟာနယ်စားပွဲ, ထိုင်ဝမ်သံလမ်းနှင့်ဘောလုံးကို screw နှစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။
•ဖုန်စုပ်အလုပ်လုပ်စားပွဲ, PVC ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အလွယ်တကူအမျိုးမျိုးကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများကိုင်ထားရန်,
•သင်သည်လည်းသစ်သားပန်းပုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကိုလည်းသင်တို့အဘို့လေဟာနယ်နှင့် t-slot ကစားပွဲပေါ်မှာဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်;
•သင်ဆဲပင်တွေ့ကြံပါဝါသော်လည်းပယ်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကမူရင်း NK105 ထိန်းချုပ်မှုအလွန်လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်ထောက်ခံမှုအော့ဖ်လိုင်း;
•တရုတ် 3.5kw လေထုအအေးဗိုင်းလိပ်တံ။ တရုတ်ကအကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုကောင်းမကောင်းအာမခံချက်ပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှု;
•လွယ်ကူ servo စနစ်။ Big power supply (Stepper နှင့်သင့် option ကိုများအတွက် Servo motor ကို);
• X, Y, Z ကိုအလုပ်အဖွဲ့ဧရိယာ: 1300x2500x200mm;
နေရာချထားတိကျပြတ်သားမှုနယ်လှည့်• X, Y, Z ကို: 0.03 / 300mm ±;
•စားပွဲတင်က Surface: ဖုန်စုပ် & T-slot ကစားပွဲတင်;
• Frame က: welded ဖွဲ့စည်းပုံ, မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်သည် T-ဖွဲ့စည်းပုံမှာ;
• X, Y ဖွဲ့စည်းပုံ: Helical သိုလှောင်ဆင်ဂီယာ, ထိုင်ဝမ် 25 ရထား Linear ဝက်ဝံ;
• Z ကိုဖွဲ့စည်းပုံ: ထိုင်ဝမ် TBI Ball ကိုဝက်အူထိုင်ဝမ် 25 ရထား Linear ဝက်ဝံ;
•မက်စ်။ Power Consumption: 2.0KW;
•မက်စ်။ လျင်မြန်သောခရီးသွားနှုန်း: 45000mm / မိနစ်;
•မက်စ်။ အလုပ်အဖွဲ့မြန်နှုန်း: 30000mm / မိနစ်;
•ဗိုင်းလိပ်တံ Power: 3.5KW လေထုအအေးဗိုင်းလိပ်တံ;
• Drive ကို Motors က: တရုတ်လွယ်ကူသော servo motor ကို (option ကို: မြစ်ဝကျွန်းပေါ် servo, YASKAWA servo)
• Operating System ကို: မူရင်း NK105 (Option ကို: DSP, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားစတူဒီယို ... );
1. Wood ကပရိဘောဂစက်မှုလုပ်ငန်း: Wave ကိုပန်းကန်, ဒဏ်ငွေပုံစံ, ရှေးဟောင်းပရိဘောဂ, သစ်သားတံခါး, Screen, ယာဉ်ခါးပန်း, ပေါင်းစပ်တံခါးတို့, ဗီရိုတံခါးများ, အတွင်းပိုင်းတံခါးများ, ဆိုဖာခြေထောက်, headboards ဒါအပေါ်;
2. Advertising ကြော်ငြာစက်မှုလုပ်ငန်း: Advertising ကြော်ငြာ indentification, နိမိတ်လက္ခဏာကိုချမှတ်ခြင်း, acrylic ထွင်းထုနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း, ကျောက်သလင်းစကားလုံးချမှတ်ခြင်း, blaster တန်ဆာနှင့်အခြားကြော်ငြာပစ္စည်းများအနကျအဓိပ်ပါယျအောင်;
3. Decoration စက်မှုလုပ်ငန်း: acrylic, PVC, MDF, အတုကျောက်ဖိုက်ဘာမှန်, ပလပ်စတစ်နှင့်ကြေးနီနှင့်လူမီနီယံနှင့်အခြားပျော့သတ္တုပန်းကန်ထွင်းထုများနှင့်ကြိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း,
ယခင်: Chencan P1325
နောက်တစ်ခု: CNC Wood Cutting and Drilling Machine C-4D
1325 လက်စွဲစာအုပ်သစ်သားထည် CNC Router စက်
1325 Wood က CNC Router
2d 3d သစ်သားထည် CNC Router
3 ဝင်ရိုးတန်း CNC Wood က Router
3 ဝင်ရိုးတန်း CNC Wood က Router စက်
3 ဝင်ရိုးတန်း CNC သစ်သားထည်စက်
3 ဝင်ရိုးတန်း Wood က CNC စက်
3 ဝင်ရိုးတန်း Wood က CNC Router
3 ဝင်ရိုးတန်း Wood က Router
3 ဝင်ရိုးတန်းသစ်သားထည် CNC Router
Wood ကသည် 3d CNC Router
စက်ထွင်းထု 3d CNC Wood က
ရောင်းရန်စက်ထွင်းထု 3d CNC Wood က
3d CNC သစ်သားထွင်းပုံစံများ
3d CNC Wood က Router
3d CNC သစ်သားထည်စက်များ
CNC သစ်သားထွင်းသည် 3d ဒီဇိုင်း
3d သစ်သားထွင်း Designs
မိတ္တူပွားထွင်းထု 3d Wood က
ရောင်းရန်စက်ထွင်းထု 3d Wood က
3d သစ်သားထွင်း Tools များ
3d Wood က CNC
3d Wood က CNC စက်
ရောင်းရန် 3d Wood က CNC စက်
3d Wood က Cutter
CNC စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း 3d Wood က
CNC Router ထွင်းထု 3d Wood ကအက္ခရာ တင်.
3d သစ်သားထည် CNC အက္ခရာ တင်. စက်များ
3d သစ်သားထည် CNC Router
4 ဝင်ရိုးတန်းသစ်သားထည် Router
5 ဝင်ရိုးတန်း CNC Wood က Router
Atc CNC သစ်သားထည် Router
Atc သစ်သားထည် CNC Router
တရုတ် Wood ကလုပ်ငန်းခွင် CNC Router
သစ်သားထည်သည် CNC Router
CNC Router Wood ကအလုပ်အဖွဲ့ Machinery
Wood ကသည် CNC router များ
CNC Wood ကကမ္ပည်းထိုးလုပ်ငန်းစက်
CNC သစ်သားထည်အက္ခရာ တင်. စက်
CNC သစ်သားထည်စက် Router
တရုတ်ခုနှစ်တွင် CNC သစ်သားထည် Router
High Quality သစ်သား CNC Atc Router
High Quality သစ်သားထည် CNC Router
အကြီးစားသစ်သားထည် CNC Router
metal သစ်သားထည်အက္ခရာ တင်. စက်
Mini ကို CNC သစ်သားထည် Router
multi ခေါင်းဆောင်များ CNC Wood က Router
router CNC Wood က
အတန်းအမျိုးအစား Atc သစ်သားထည် CNC Router
အသေးစား Wood က CNC Router
အသေးစားသစ်သားထည် CNC စက်
3d CNC Router ထွင်းထုသစ်သား
စက်5ဝင်ရိုးတန်းထွင်းထုသစ်သား
သစ်သားဂူအောင်းခြင်း CNC Router
သစ်သား CNC Router Atc
သစ်သား CNC Router စျေး
သစ်သား Cutter စက်
သစ်သားအက္ခရာ တင်. CNC စက်
သစ်သားအက္ခရာ တင်. Cutter CNC Router
သစ်သားအက္ခရာ တင်. ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
သစ်သားအလုပ်အဖွဲ့ CNC Router
ရောင်းရန် CNC စက် Woodworking
Woodworking CNC Router စက်
CNC Router စက်များ Woodworking
လက်သမား Router စက်
Chencan GM3012AH5 Composite ဘုတ်အဖွဲ့ CNC Processin ...
Chencan MS1325AD တရုတ် ATC Wood က CNC Router Engr ...